Dagaal xoogleh oo laga soo sheegayo deegaano kuyaala Gobolka Galgaduud – SBC
Dagaal xoogleh oo laga soo sheegayo deegaano kuyaala Gobolka Galgaduud
Dagaalkan ayaa ka dhacay Gobolka Galgaduud gaar ahaan halka lagu magacaabo beerta Siliga oo ay horay ugu sugnaayeen xarakada Shabaabul Mujaahidin, waxaanu dagaalku ka dambeeyay ka dib markii halkaasi ay weerar ku qaadeen ciidamada Culimada Ahlusuna waljamaaca.
Dagaalka ayaa ahaa mid xoogan sida uu SBC International u sharaxay C/laahi Axmed Samatar oo ah Afhayeenka maamulka Ahlusuna, waxaanu sheegay in laba wajahad uu dagaalku ka dhacay, islamarkaana aan dhankooda jirin wax khasaare ah oo gaaray.
Waxa uu sidoo kale Afhayeenku beeniyay in aan haba yaraate ciidamada Itoobiya in ay la dagaalgalaan iska daaye aanay gacan ka siineynin dagaalka, islamarkaana ay dagaalku ku jiraan oo keliya ciidamada Ahlusuna.
Dhinaca kale Mar uu xiriir la sameeyay xafiiska SBC ee Gobolka galgaduud dhinaca kale ee xarakada Alshabaab ayaanay u suurto galin sababo khadka oo xun iyo dagaal soconayay.
Sikastaba ha ahaatee ilaa iyo iminka lama xaqiijin karo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan, iyadoona la rumeysan yahay in uu jiro khasaare maadaama goobaha lagu dagaalamo ay yihiin goobo ay ku keli yihiin dhinacyada dagaalamaya oo keliya.